ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီးဆေး ကုရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို ဆေးကုသငွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝေ…. – CELE WINGAGAR
ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီးဆေး ကုရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို ဆေးကုသငွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝေ….
December 5, 2021 100million Articles 0
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အခုလိုချိန် စားဝတ်နေရေးသာမက အဘက်ဘက်ကခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေကြတာပါ။ပရဟိတမင်းသမီးကြီးခိုင်နှင်းဝေ ကတော့ဒီနေ့မှာ ဝမ်းနည်းဖ့ကောင်းတဲ့အလှူရှင်လေးနှစ်ဦးကိုကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဝေမျှလာခဲ့တာပါ….။
“သားအမိ (၂) ယောက်လုံး ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီး ဆေးဆက်လက်ကုသနိုင်ရန် အခက်အခဲရှိနေပါသောကြောင့် အလှူငွေ (၂) သိန်းကျပ် ကို ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ မြတ်ကုသိုလ် အဖြစ်လှူပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…အမေရော သမီးလေးပါ သက်ရှည်ကျန်းမာလို့ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး အခက်အခဲများ အားလုံး ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ မေတ္တာ ပို့ကာ ဆုတောင်းပေးမိပါတယ်ရှင်… ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ လှူဒါန်းမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုဝေမျှခဲ့တာပါ…။
အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အမြဲကူညီလှူဒါန်းပေးတတ်တဲ့ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့စေတနာကတော့ တကယ့်ကို​လေးစားစရာပါ။ပရိသတ်ကြီးလည်း ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်တွေကို မုဒိတာပွားရင်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အခုလိုခြိနျ စားဝတျနရေေးသာမက အဘကျဘကျကခကျခဲနတေဲ့ကာလမှာ ဆေးကုသဖို့ ခကျခဲနတေဲ့သူတှလေညျးမြားစှာရှိနကွေတာပါ။ပရဟိတမငျးသမီးကွီးခိုငျနှငျးဝေ ကတော့ဒီနမှေ့ာ ဝမျးနညျးဖ့ကောငျးတဲ့အလှူရှငျလေးနှဈဦးကိုကုသိုလျပွုလှူဒါနျးခဲ့ကွောငျးဝမြှေလာခဲ့တာပါ….။
“သားအမိ (၂) ယောကျလုံး ကငျဆာရောဂါခံစားနရေပွီး ဆေးဆကျလကျကုသနိုငျရနျ အခကျအခဲရှိနပေါသောကွောငျ့ အလှူငှေ (၂) သိနျးကပျြ ကို ခုနှဈရကျသားသမီးမြား မွတျကုသိုလျ အဖွစ်လှူပေးဖွဈခဲ့ပါတယျ…အမရေော သမီးလေးပါ သကျရှညျကနျြးမာလို့ ကနျြးမာ ခမျြးသာပွီး အခကျအခဲမြား အားလုံး ကြျောဖွတျနိုငျပါစလေို့ မတ်ေတာ ပို့ကာ ဆုတောငျးပေးမိပါတယျရှငျ… ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ လှူဒါနျးမှုပုံရိပျလေးတှကေိုဝမြှေခဲ့တာပါ…။
အရေးပျေါလိုအပျနတေဲ့အခြိနျမှာ အမွဲကူညီလှူဒါနျးပေးတတျတဲ့ခိုငျနှငျးဝေ ရဲ့စတေနာကတော့ တကယျ့ကို​လေးစားစရာပါ။ပရိသတျကွီးလညျး ခိုငျနှငျးဝေ ရဲ့မှနျမွတျတဲ့ ကုသိုလျတှကေို မုဒိတာပှားရငျသာဓုချေါခဲ့ကွပါဦးနျော…။
ဇနီးလောင်းလေးရီရီ ပွင့်ဖြူရဲ့မွေးနေ့ လေးမှာ သူများတွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
သိနျးတဈသောငျးခှဲထီပေါကျ ထားရဲ့သားနဲ့ မရှိခငျြယောငျ ဆောငျနတေယျဆိုတဲ့ စှပျစှဲခကျြကို ပွနျလညျခပြေလာတဲ့ ဟမောမနျးဝငျး
Juction City မှာမုန့်ဟင်းခါးလူတေတန်းစီရတဲ့အထိရောင်းခဲ့ရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ရဲလေးမ
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာမှမိခင်မေတ္တာကိုခံစားမိကြောင်း ဘေဘီမောင် ရေးသားဖော်ပြလာ
သားကြီးဂျက်ဂျက်တုန်းကဂရုတစိုက်နဲ့ထိန်းခဲ့ရပေမယ့် သမီးလေးဂျူဂျူးကိုကြ သေချာဂရုမစိုက်နိုင်ကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာခဲ့တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း